६ महिनामा बागमती आयोजनाको विद्युत् प्रणालीमा थपिने - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
६ महिनामा बागमती आयोजनाको विद्युत् प्रणालीमा थपिने
माघ २८, २०७४ 4729 ऊर्जा खबर/ काठमाडौं
ललितपुर र मकवानपुरको सीमामा निर्माणाधीन २२ मेगावाटको बागमती साना जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् अबको ६ महिनामा राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने भएको छ । ७५ प्रतिशत निर्माण पूरा भएको आयोजनाबाट २०७५ असारमा विद्युत् उत्पादन गर्न लागिएको हो ।
२०७२ जेठबाट निर्माण थालिएको आयोजना निर्धारित तालिका अनुसार सम्पन्न गर्न बाँध, सुरुङ र विद्युत्गृहमा एकसाथ काम भइरहेका आवासीय इन्जिनियर रत्न बम्जनले बताए ।
उनका अनुसार गत शुक्रबार आयोजनाको २४ सय ४० मिटर लामो सुरुङ छेडिएको छ । आयोजनाको सम्पूर्ण सिभिल संरचना निर्माणको जिम्मा लिएको साउथ एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चरले साढे २ वर्षमा सुरुङ छेडेको हो । साउथ एसियन नेपाली निर्माण कम्पनी हो । छेडिएको सुरुङमा कंक्रिटिङ सुरु गरेर ५ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको प्रवर्द्धक माण्डु हाइड्रो पावर कम्पनीले जनाएको छ ।
यस्तै, विद्युत्गृहमा पनि ७० प्रतिशत निर्माण सकिएको छ । विद्युत्गृहमा जडान हुने इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आयात तथा जडान भइरहेको बम्जनले बताए ।
आयोजना पूरा भई विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि मकवानपुरको ढोरसिंहस्थित कुलेखानी पहिलोको स्विच स्टेसनमा लगेर जोडिने छ । ४ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा प्राइम बैंकको अगुवाईमा ११ बैंकले कुल लागतको ७० प्रतिशत ऋण लगानी गरेका छन् । ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी छ ।